waa maxay Nandrolone Phenylpropionate/NPP?
Nandrolone Phenylpropionate (62-90-8) waa mid ka mid ah noocyada badan ee anabolic anabolic available ee suuqa. Steroidkani waxay leedahay sifooyin iyo saameyn isku mid ah Nandrolone Decanoate. Qaybta Nandrolone ee ugu horeysay ee lagu iibiyo waa Nandrolone Phenylpropionate (NPP). Waxyaabahan cajiibka ah ayaa bilaabay in ay garaacaan qalabka 1950s ka dib markii ay sii daayeen Organon oo leh magac magaciisu yahay Durabolin. Steroidkani waa steroid yar oo saliideed ah, waxaana caadi ahaan loo yaqaan NPP. Sababta keentay in Nandrolone Phenylpropionate uusan ku riyaaqin caanno badan ayaa sabab u ah aaladda yaryar. Cirbidaha dhererka loo yaqaan 'estabolic steroids' sida ciriiriga Nandrolone Decanoate waxay ku raaxeeysataa isticmaalka weyn ee ka mid ah ciyaartoyda cayaaraha ah iyo kuwa jirka dhismaha ah maxaa yeelay waxay haystaan ​​nolol firfircoon ee nidaamka jirka. Si kastaba ha ahaatee, Nandrolone Phenylpropionate waxay weli saameyn cajiib ah u tahay dhammaan isticmaalayaasheeda. Dhakhaatiir badan oo xirfadlay ah ayaa isticmaala Nandrolone Phenylpropionate ee jirka dhismaha iyo hagaajinta waxqabadka.
Wakhti yar ka dib, way adagtahay in la helo Nandrolone Phenylpropionate (62-90-8) suuqa oo ka qaybqaatay hoos u dhaca isticmaalka iyo caanaha. Si kastaba ha noqotee, sanadihii la soo dhaafay ayaa steroid bilaabay in la heli karo thanks to shaybaarrada dhulka hoostiisa oo hadda soo saaraya dhammaan noocyada Durabolin qiyaasaha. Daawada hadda waa mid si sahlan loo heli karo, waxaadna marwalba ka dhigi kartaa amarkaaga boggeena waqti kasta. Waqtiga la soo dhejiyo, waqtigeena qiimeeynu waa jeebka ku habboon. Waxaan mar walba kugula talineynaa inaad tagto baaritaan caafimaad inta aanad bilaabin isticmaalka mid ka mid ah steroids anabolic. Nandrolone Phenylpropionate waxay u qalantaa dareen gaar ah tan iyo markii ay bixiso natiijooyinka tayada iyo in ka badan Deca Durabolin.
Caadi ahaan, Nandrolone Phenylpropionate sida aan hore u sheegnay waxay ahayd midkii ugu horreeyay ee Nandrolone ee lagu sii daayo suuqa. Hirgelinta walaxdan weyn ee steroid Deca Durabolin waxay samaysay Nandrolone Phenylpropionate in la ilaawo warshadaha dhismaha jirka sanado badan. Sanadaha hore ee duritaanka steroid waxaa loo tixgeliyaa habdhaqan la xiriirta hirowiin. Xayiraaddu waxay saameyn ku yeelatay xulashada ciyaartoyda badan marka ay timaaddo steroids. Waqtigaas ma jiro jir-dhiseyaal ama orodleey rabeen in lala xiriiriyo steroid la isku duro, taas oo saameeysay sahayda iyo isticmaalka Nandrolone Phenylpropionate. Sidaa daraadeed, dad badan ayaa dejiyey daroogada Deca Durabolin oo aan u baahnayn wax tallaal ah oo joogto ah si loo helo natiijooyinka la rabay.
Muddadaa, badeecadu waxay u muuqatay in ay suuqa ka baabi'een, laakiin maanta waa warka wanaagsan in aad si sahlan u iibsato sheygaaga boggeena. NPP maaha mid sharci ka ah Maraykanka Maraykanka haddii aan loo soo qorin isticmaalka caafimaadka. Inta badan dadka ayaa raadinaya badeecadan, sababtoo ah natiijooyinka tayada waxay bixisaa marka loo isticmaalo jirka jirka. Mararka qaarkood way adag tahay in la helo dhakhtar u qori doona daroogada ujeeddooyinka jirka. Si kastaba ha noqotee, inaad xor u tahay inaad nagula soo xiriirto wakhti kasta oo aad qabto arin, shaqaalena adeegga macmiisha ee awood u leh inay ka jawaabaan dhammaan wixii walaac ah.
Ku saabsan waxqabadka hoormoonka, Nandrolone Phenylpropionate(62-90-8) wuxuu ka shaqeeyaa isla sidii Nandrolone Decanoate (360-70-3). Isticmaalida stabdhab anabolic labadaba waxay isticmaalaan hoormoon firfircoon oo la mid ah, waxaana laga yaabaa inay taasi sabab u tahay sababta dad badani ugu wareersan yihiin sidii wax la mid ah. Farqiga farqiga u dhexeeya labadan stoids ayaa ah in Nandrolone Phenylpropionate uu leeyahay qashin gaaban isla markaana wuxuu keenaa natiijooyin tayo leh marka la mariyo duritaanka. Daroogadu waxay leedahay nolol yar oo gaaban taasoo macnaheedu tahay in aad qaadato inta jeer ee aad qaadato qiyaastaada si aad u hesho natiijo fiican iyo waxtar leh. Farqiga kale ee ka dhexeeya labadan xididood ee steroids waa in NNP ay dhaqdhaqaaqa jirka ka dhaqso badan tahay Deca Durabolin, hase yeeshee waxay leedahay wax yar oo firfircoon oo firfircoon. NPP waxay ka badan tahay faa'iidooyinka kale ee anabolic steroids, taas oo ka mid ah sababaha ugu muhiimsan ee badeecada ay ugu roon tahay goobta caafimaadka iyo sidoo kale kuwa jir-dhisayaasha iyo cayaaraha. Steroid waxay kicisaa wax soo saarka unugyada dhiigga cas cas oo kor u qaadaya bixinta dhiigga iyo nafaqooyinka dhammaan qaybaha jidhkaaga. Sidoo kale, daroogada ayaa yareyneysa macnaha dufanka xitaa ka dib markaad shaqeyneyso mudo dheer; looma ogaan doono muruqyada muruqyada ama daalka.
Waxaa lagu taliyey Qiyaasta Nandrolone Phenylpropionate waxay kala duwan tahay 50-100mgs / maalin. Qiyaasta qiyaasta waa in la qaataa iyada oo loo marayo cirbadeynta maadama ay tahay daawada steroid ee lagu mudo. Markaad qaadato steroid this, waxaad u baahan tahay inaad taxaddar. Haddii aadan aqoon sida loo isku duro naftaada u sheeg dhakhtarkaaga si aad u ballansatid booqasho joogta ah qiyaasta. Nandrolone Phenylpropionate ayaa la qaadan karaa maalin kasta ama saddex jeer toddobaadkii. Sidaa daraadeed, si fudud ayaad u qorsheyn kartaa maalmaha qiyaasta dhakhtarkaaga oo ka fogow dhibaatooyinka keena haddii aad isku mari karto cirbadaha. Inkastoo dadka qaar ka cabsanayaan cirbadaha, Nandrolone Phenylpropionate waxay kuu sahleysaa inaad hesho natiijooyinka aad u baahan tahay wakhti aad u gaaban. Sidaa darteed, uma baahnid inaad isticmaasho steroid muddo dheer, taasina waa warka wanaagsan tan iyo markii aad u dulqaadan lahayd cirbadaha mudo gaaban.
Bilaabayaasha cusub ayaa had iyo jeer lagula taliyaa in ay bilaabaan qiyaasta hoose ee la isku hagaajin karo kadib markaad u guurto wareegga xiga ee Nandrolone Phenylpropionate. Jidh-dhiska sare waxay qaataan qiyaas ballaadhan oo xitaa u kala gudbin karaan 400-800mgs asbuucii. Waxaad qaadan kartaa qiyaastaada NPP-gaaga adiga oo isticmaala tijaabada baaritaanka. Dumarka jecel in ay isticmaalaan steroidkan, tixgeliyaan qaadashada qiyaasaha NPP ee u dhaxeeya 50 ilaa 100mgs asbuucii. Qaadashada qiyaasta xad-dhaafka ah waxay keeni kartaa horumarinta muruqyada ragga oo aan si wanaagsan u wanaagsaneyn gabadha. Qaadashada steroidkaan waxay sidoo kale horseedi kartaa saameyn aad u daran, sidaas darteed ku dheji talooyinka dhakhtarkaaga ee natiijooyinka wanaagsan. Kuwa jir-dhiseyaasha iyo cayaartoyda, waa inaad la socotaa wareeggaaga iyadoo la adeegsanayo tababaro iyo cunto ku haboon natiijooyinka tayada. Haddii aad aragto waxyeellooyin daran oo daran kadib markaad qaadanayso qiyaasta daawadaada u sheeg dhakhtarkaaga si aad u bixiso xal ka hor intaanad dhicin. Masteron Propionate ama Masteron Enanthate? Midkee ayaa kuu fiican?
Baaritaan caafimaad ayaa lagama maarmaan ah ka hor intaadan bilaabin qaadashada qiyaasta Nandrolone Phenylpropionate. Waxaa dhici karta in aad qabtid xaalado caafimaad sida wadnaha wadnaha iyo kuwa kale oo aan kuu ogolaanin inaad isticmaasho sterooto. Waxaa jira daawooyin kale oo aan taageersaneyn inay la socdaan Nandrolone Phenylpropionate. Haddii aad daawo ku jirtid wax cudur ah, u sheeg dhakhtarkaaga inta aadan bilaabin wareeggaaga NPP. Waxaa sidoo kale jira dad qaata NPP ujeeddooyinka daaweynta, oo markaa, qiyaasta daawadu waxay u kala duwanaan kartaa bukaanka mid kale. Sidaa daraadeed, dhakhtarkaaga ayaa noqon doona qofka ugu fiican si loo go'aamiyo qiyaasta saxda ah ee xaaladdaada.
Nandrolone Phenylpropionate (NPP) wareegga
Maadaama uu NPP yahay steroid gaaban oo macnaheedu yahay in uu dhaqso u shaqeeyo jirkaada si uu u keeno natiijooyin dhakhso leh, wareegga daroogada maaha inuu noqdo muddo dheer. Waxaad isticmaali kartaa NPP si yar sida 6-8 usbuucyada wakhti aadna hesho natiijooyinka aad rabto. Sidaa darteed, Nandrolone Phenylpropionate waxay ku siinaysaa fursad aad ku isticmaasho wakhti gaaban oo aad sii wado noloshaada caadiga ah inta aad ka heshay natiijooyinka. Si kastaba ha noqotee, mararka qaarkood NPP waxay u kici karaan toddobaadka 10 ee wali gaaban marka la barbardhigo wareegga Durabolin. Dhismayaal badan oo la mid ah isticmaalka NPP oo la socota steroids dhererka dheer si loo dedejiyo natiijooyinka aan ahayn fikrad xun. Mararka qaarkood, waxaad isticmaali kartaa labo stobbaar oo ah dheef-shiid kiimikaad-gareer ah oo aad ku heli karto natiijooyinka aad rabto. NPP waa steroid isbarbardhac ah, taas oo macnaheedu yahay inay muhiim u tahay labada goynta ama goynta wareega. Isticmaalida daawooyinka kale ee steroid ah sida daawooyinka kale sida Winstrol waxay noqon doontaa fikrad wanaagsan oo kor u qaadeysa ficilka degdegga ah. Eeg wareegga NPP ee hoos ku xusan;
Nandrolone Phenylpropionate wareega jarida
Week propionate testosterone Nandrolone Phenylpropionate Winstrol Masteron N2Guard Kaararin
Sidoo kale waa inaad la socotaa wareegga Aromasin sida AL-ka-hortagga, adoo qaadanaya qiyaasta maalinlaha ee 12.5mgs. Mararka qaarkood wareegyada way kala duwanaan karaan balse waxaa laguu balan qaadayaa natiijooyinka tayada.
Natiijooyinka Nandrolone Phenylpropionate (NPP)
Markaad wax soo saarka wax ka qabanaysid oo keliya NPP, marwalba waxaad maskaxda ku haysaa natiijooyinka aad filayso dhamaadka wareegga. Xaaladdan, sida jirka jirka ah ama cayaaraha fudud, waxaad qorsheyneysaa inaad kasbato murqaha, dufanka la gooyo iyo dhammaadka maalinta si aad u hesho habka aad u jeceshahay jirka. Hase yeeshee, NPP waxay bixisaa natiijooyin kala duwan iyadoo ku xiran sababaha ka dambeeya isticmaalka. Qaar ka mid ah natiijooyinka caanka ah ee Nandrolone Phenylpropionate waxaa ka mid ah;
Horumarinta murqaha weyn ee caanaha
Waqtigaan, waxaa jira waxyaabo aad u yar oo ah anabolic steroids kaas oo la barbar dhigi kara natiijooyinka Nandrolone Phenylpropionate (NPP) ee ku saabsan bixinta murqaha caanaha ah iyo sidoo kale kordhinta xooggaaga. Ma fududa in la helo cayaartoyda ama jir-dhiseyaashu ku faanaan inay helaan lacagaha 20-30 inta lagu hayo oo keliya taallada 10-12. Daraasado badan oo lagu sameeyay sheygan ayaa dib u soo celiyay sheegashooyinka tan iyo markii Nandrolone Phenylpropionate loo adeegsado beerta caafimaadka si loogu daweeyo bukaanka qaba cudurrada murqaha. Inta lagu jiro hawlaha, muruqyadaada ayaa laga yaabaa inay jeexaan taas oo ah sababta ay uula kulmaan xanuunka qaarkood maalintaa ka dib tababarka. Si kastaba ha noqotee, markaad isticmaasho Nandrolone Phenylpropionate oo aan walwal lahayn. Isticmaalida steroid ayaa si dhaqso ah u dhaqaajisa muruqyadaada kadib dhaqanka xun. Sidaa darteed, haddii aad raadinayso badeecad si dhakhso ah u bedeli doonta jirkaaga markaa dejiso NPP.
Caqli ahaan, nitrojiyadu waxay door muhiim ah ka qaadataa sidii aad u heli lahayd murqaha caatada ah. Unugyada muruqyada si deg deg ah ayay ula qabsadaan borotiinka dheeraadka ah marka ay jirto dheellitirka nitrogen ee wanaagsan. Si kastaba ha ahaatee, halkan waxaad u baahan tahay inaad hubiso in aad qaadato borotiinka, iyo cuntada ayaa xoog u leh natiijada kor u qaadista nitrogen. Sidaa daraadeed, xitaa haddii aad gaabis u gooysid, ha xaddidin naftaada caanaha, iyo caanaha si aad u hesho koritaanka muruqyada deg dega ah. Cuntada ayaa muhiim u ah gaar ahaan borotiinka oo kaa caawin doona kobcinta murqahaaga.
Gargaarka gargaarka wadajirka ah
Sida jirka ah, nooca shaqadaada oo ay ka mid yihiin kaadi-mareenka culus iyo miisaan culus oo si joogta ah u-qaadista lagama-maarmaanka u ah dhexgalladaada. Inta badan waqtiyada jimicsiga adag ee laqabanayo, xubnahaaga ayaa laga yaabaa inay xanuunaan waqti dambe. Nooca jirka ah ee caadiga ah badankood ayaa ka cabanaya xanuunada wadajirka ah ka dib markii la samaysto waqti. Si kastaba ha noqotee, isticmaalka NPP wuxuu kaa caawinayaa kicinta maqaarka kollagen ee gargaar ka geysta joojinta xanuunka wadaagga ah. Daraasad sayniska ah ayaa muujisay in qaadashada Nandrolone Phenylpropionate xitaa qiyaasta hoose ee toddobaadkii sida 50mgs hal mar saddexdii usbuucba, steroids ayaa sii wadi doonta kobcinta nooca 3-aad ee kolokagen. Waa inaad mar walba xor u noqotaa dhakhtarkaaga inuu kaa caawiyo haddii xanuunnada wadajirku ay noqdaan kuwo daran ama ay waqti dheer qaataan si ay u bogsadaan.
Wuxuu keenaa natiijooyin aad u fiican xagga caafimaadka
Inta badan ee steroids anabolic loo isticmaalo jirka dhismaha iyo xirfadlayaal xirfadlayaal ah xididdadiisa ayaa laga heli karaa adeegsigooda daweynta. Daraasado kala duwan ayaa muujiyay in Nandrolone Phenylpropionate ay daweyn karaan cuduro kala duwan oo ay ku jiraan osteoporosis, dhiig yari oo ka mid ah cudurrada kale ee daba dheeraaday. Dhinaca kale, NPP waxay sidoo kale ka caawisaa dadka qaba HIV / AIDS inay dib u helaan miisaanka iyo murqaha. HIV / AIDS waa mid ka mid ah cudurrada caanka ah ee keena miisaan aad u badan. Si kastaba ha noqotee, markaad isticmaasho NPP waxaad hubsan kartaa inaad miisaankaaga dib u hesho maaddaama daroogada la og yahay in caawinta dadka isticmaala qiyaastooda ugu yar waqtiga ugu gaaban. Intaa waxaa dheer, Nandrolone Phenylpropionate waxay sidoo kale kicisaa wax soo saarka unugyada dhiigga cas cas sida kor u kaca heerarka dhiigga ee jirkaaga iyo sidoo kale sii kordhinta bixinta nafaqooyinka qaybaha kala duwan ee jirkaada. Muruqyadaada waxay sidoo kale ka faa'iideysan doonaan helitaanka alaab ku filan oo oksijiin ah taas oo sii kordheysa adkeysiga musqusha ee duurka ama baaskiilaha.
Awooda jirka ee hagaagsan
Duuliye kasta ama baaskiiladuhu waxay u baahan yihiin inay helaan awood ku filan awood iyo awood ay ku awood u yeeshaan hal tababareed saacado dheer iyo sidoo kale ka qaybgal tartamada waaweyn. Layli ku haboon wuxuu caawiyaa cayaaraha ama jir-dhisaha si uu u helo natiijooyinka uu rabo sida gubashada dufanka jirka ee xad-dhaafka ah iyo sii kordhaya muruqyada tayada leh. Si kastaba ha noqotee, cayaartoyda qaar ayaa mararka qaar ku adkaadaan inay tababbaraan muddo dheer sababtoo ah la'aanta tamar ku filan. Qaar badan oo ka mid ah kuwa isticmaalaya NPP ee xirfaddooda ciyaaraha marwalba waxay bixiyaan jawaab celin iyo dib u eegis ku saabsan sida wax soo saarku ay door muhiim ah uga qaateen xoojinta waxqabadkooda. Natiijo wanaagsan oo kale oo la filayo in la filayo inta la isticmaalayo Nandrolone Phenylpropionate waa awooda daroogada si loo daweeyo murqaha, isku-xirmooyinka ka dib shaqooyinka culus. Daalku sidoo kale waa mid caadi ah oo ka mid ah cayaaraha iyo jirdhisleyda badan sababtoo ah tababarka muddo dheer, taasina waa dhibaato aad u baahan tahay inaad ilaawto markaad doorato NPP-gaaga oo ah xirfad-xirfadeedka ugu wanaagsan eeaga xirfadeed.
NPP waxay ka kooban tahay 'ester PP' oo ku xiran kan ka masuulka ah isugeynta naceybka firfircoon ee firfircoon ee ku saabsan maalmaha 6. Sidaa daraadeed, daroogada ayaa sii wadi doonta firfircoonidaada jirkaada lix maalmood ka dib qaadashada qiyaastaada. NPP waxay leedahay nolol yar oo firfircoon marka la barbar dhigo durista Durabolin oo leh toddobaad 2 kala bar nolol kala duwanaansho oo ay abuurtay daroogada gaaban ee daroogadan. Nooc ka mid ah steroid-ka nolosha nuska ah ayaa leh faa'iidooyinkeeda maaddaama daroogada ay si dhakhso ah ugu faafto dhiigga. Sidaas awgeed, dhaqso u dhaqso oo u bixiya natiijooyin waqti gaaban.
Halkaasna, lagama rabi doono inaad ku lumiso bilowga steroid. Isticmaalayaasha NPP sidoo kale waxay dareemaan in si dhaqso ah looga nadiifiyo steroid jirka ka yimaada taas oo u sahli karta qanjidhada ciridkaaga inay si dhakhso ah u soo kabtaan. Qiyaasta loo yaqaan NPP ayaa loo qorsheeyay sida ay nolosheeda u tahay si loo hubiyo inaad hesho labbis iyo natiijooyin joogto ah inta lagu jiro wareegga wareegga.
Nandrolone Phenylpropionate (NPP) ee jarista
Marxaladaha wejiga ayaa lagama maarmaan u ah wax kasta oo jirka ka mid ah jirka ama cayaaraha oo ujeedkiisu yahay helitaanka murqaha cirridka iyo murqaha. Waxaa jira jirro dufan badan oo jidhkaaga ku jira oo laga yaabo inay kuu diidaan fursadda aad ku heli karto muruqyada ugu fiican xitaa ka dib qaadashada steroids oo si sax ah u shaqaynaya. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay steroid kaa caawin kara inaad ka takhalusto dufanka jirka ee aan loo baahneyn. Nandrolone Phenylpropionate waxaa lagu dhejin karaa steroids kale iyo daroogo si loo gaarsiiyo faa'iidooyin badan oo tayo leh. Inkasta oo NPP ay caan ku tahay ujeedooyinka ciriiriga, marka si habboon loo jaro waxay caawin kartaa jarista wareegyada. Waxaad ka hubin kartaa kore ee 3, waxaan ku siinay tusaale tusaale ah wareegga jarista Nandrolone Phenylpropionate iyo sida loo dhejiyo natiijooyinka wanaagsan.
Waxaa jira sababo kala duwan sababta cayaartoyda badan iyo kuwa jidh-bixiyeyaashu ay u tagaan jarista wareegyada ugu weyn ee ah inay u suura galiyaan inay gubaan dufanka jirka ee xad-dhaafka ah. Si aad u hesho qaabka jirka iyo murqaha tayada leh, waa inaad marka hore u baahato inaad gubto dufanka hoostiisa. Waxaa laga yaabaa inaad la kulanto koritaanka unugyada ka dib markaad qaadato steroid, laakiin muruqyada ayaa ku fashilmay inay muuqdaan sida aad rabto. Taasi waa sida dufanka jirka ee xad-dhaafka ah uu niyad-jebin karo xirfaddaada jirka. Qaab jirka ah ayaa sidoo kale lagama maarmaan u ah xirfad-ciyaareed kasta, waxaa laga yaabaa inaad jir ahaan ujirto, laakiin jirkaaga ma ahan mid cajiib ah. Qaar ka mid ah dufanka caloosha qaarkood, tusaale ahaan, way adag yihiin xataa markaad bilawdo bilaha. Xaaladdaas, waxaad u baahan tahay kabid dheeraad ah si aad uga caawiso inaad gubto dufanka oo aad hesho muuqaalka muuqaalka riyada, qaabka iyo sidoo kale muruqyada tayada.
Takhtarkaaga ayaa sidaas darteed, kaa caawin doona inaad sameysid wareegis tayo leh. Adiga oo maskaxda ku haysa in Nandrolone Phenylpropionate ay kordhin karto miisaanka jirka, adigoo isticmaalaya keligaa ma aha fikrad wanaagsan haddii aad sugeyso inaad gubto dufanka jirka. La tashiga dhakhtarkaaga ka hor intaanad bilaabin qaadashada steroid tan ayaa kaa caawin doonta inaad gaarto hadafyadaada. Ku dhowaad dhammaan calaamadaha steroids waxay la xiriiraan waxyeelo waxyeelo leh, laakiin waad iska ilaalin kartaa markaad qaadato Nandrolone Phenylpropionate si wadajir ah daawada saxda ah ama steroids sida daawada testosterone propionate iyo sidoo kale fiirinta tilmaamaha qiyaasta. Nidaamka caadiga ah ee Nandrolone Phenylpropionate wuxuu kala gooyaa toddobaadyada 8-12, inkastoo ay sii dheereyn karto. Jawaabta jirkaaga iyo sida ugu dhakhsaha badan ee daroogada ay u dhaqmeyso jidhkaaga ayaa go'aaminaya in wareegga la dhimayo ama la kordhin doono.
Nandrolone Phenylpropionate (NPP) ee Bulking
Xaaladda anaboleed ee hooseeya iyo midda sare ee Nandrolone Phenylpropionate waxay ka dhigtaa steroid taariikhi ah oo loogu talagalay ujeedooyinka daadinta. NPP waxaa lagu dari karaa daroogo afka ah sida Dianabol, Anadrol, iyo testosterone si loo abuuro wareegga firfircoon. Nandrolone Phenylpropionate waxaa loo yaqaanaa kicinta murqaha muruqyada iyo xoojinta murqaha. Ku darida daawadan leh habka saxda ah iyo cunto ayaa sidoo kale kuu sahlaya inaad ku raaxaysato faa'iidooyinka ugu badan ee waxtarka. Xilliyada cirbadaha ayaa ka buuxa layliyo culus oo ay ku jiraan miisaanka culus ee culus oo keeni kara xanuunka dheeraadka ah ee muruqyada muruqyada. Si kastaba ha noqotee, loogu talagalay dadka isticmaala Nandrolone Phenylpropionate, dhibaatooyinka la xiriira shaqooyinka culus ayaa hoos u dhacaya. Tusaale ahaan, NPP waxay u suurtagelisaa soo kabashada degdegga ah iyo bogsashada labada jibbaar iyo murqo xanuun. Trenbolone Enanthate vs Trenbolone Acetate (Midkee Wins?)
Daroogadu waxay kobcisaa unugyada dhiigga cas cas oo kor u qaada oksijiinka iyo nafaqooyinka. Sidaa darteed, awood u siin dhammaan unugyada jidhkaaga si ay u dayactiraan muddada ugu gaaban ee suurtogalka ah iyo sidoo kale hagaajinta suugaanta kollagen. Dhammaadka dhammaan geeddi-socodka kor loo qaaday, xanuunku wuu baxayaa, daalku wuxuu noqonayaa wax ka mid ah waagii hore. Daraasado kala duwan ayaa sidoo kale muujiyay in Nandrolone Phenylpropionate ay muhiim u tahay caawinta dadka isticmaala cudurrada muruqyada lafdhabarka ah si ay dib ugu helaan miisaankooda lumay. Taasi waa war wanaagsan oo loogu talagalay ciyaartoyda doonaya in ay yeeshaan murqaha caatada ah iyo qiyaasaha qaarkood. Dhaqdhaqaaqyada isboortiga qaarkood sida rugby, sanduuqyada ama kubadda cagta Mareykanka, oo leh muruq xoog leh, xoog iyo jimicsi heer sare ah ayaa noqon doona mid lagu daro xirfadaada. Sidaa darteed waxaad u baahan tahay inaad ku kalsoonaato Nandrolone Phenylpropionate natiijooyinka tayada.
Faa'iidooyinka Nandrolone Phenylpropionate (NPP)
Waxaa jira faa'iidooyin badan oo aad ku raaxeysan kartid adigoo isticmaalaya Nandrolone Phenylpropionate iyo qaar ka mid ah waxaan horay u soo sheegnay maqaalkan. Si kastaba ha ahaatee, faa'idooyinka oo kaliya waxay u yimaadaan kuwa isticmaala daroogada si sax ah uuna u hoggaansamaan dhammaan tilmaamaha isticmaalka ay bixiso dhakhtar caafimaad. Steroid ayaa loo xaqiijiyay inay faa'iido u leedahay jarista ama xajinta wareegyada iyo sidoo kale goobta caafimaadka. Ku dhowaadba steroid kasta wuxuu bixiyaa faa'iidooyin kala duwan ee dadka isticmaala kuwaas oo ka dhigaya inay ka dhex muuqdaan noocyada kale. Dheefaha Nandrolone Phenylpropionate waxay bixisaa faa'idooyinka soo socda;
Steroid si dhakhso ah u shaqeynaya
Nandrolone Phenylpropionate oo ah steroid gaaban, wuxuu si fudud u nuugo dhiigga sidoo kale wuxuu keenaa natiijooyin degdeg ah. Inta badan dadka isticmaala NPP ayaa ku ammaanaya inay awood u leeyihiin inay helaan natiijooyinka ay doonayaan waqtiga ugu gaaban ee suurtogalka ah. Xitaa ka hor inta aanad dhicin wareeggaaga ama googo-goyska, waxaad horay u soo marin doontaa guulaha. Taasi waxay ka dhigan tahay inaadan u baahnayn inaad isticmaasho daroogada mudo dheer si aad u hesho natiijooyin sida murqaha murqaha iyo koritaanka murqaha. Dad badan ayaa ka baqaya cirbadaha, laakiin wax fiican ayaa ah in aad qaadanayso qiyaasta mudo gaaban kadib markaad fiicnayd inaad tagto.
Waxay hagaajisaa waxqabadka guud
Qeybta ugu fiican ee steroidkaan waa in ay u suurogeliso cayaartoyda inay kor u qaadaan waxqabadkooda inta lagu jiro tartamada. Nandrolone Phenylpropionate waxay hagaajinaysaa awoodda jidhka waxayna siineysaa tamarta cayaar kasta oo u baahan in la sarreyo. Daawada sidoo kale waxay door muhiim ah ka ciyaartaa in ay gacan ka gaysato jir-dhiseyaasha, iyo ciyaartooyda ayaa ka takhalusi daalka iyo sidoo kale isku-darka ama murqaha. Sidaa daraadeed, ciyaartoydu marwalba waxay dareemayaan marwalba mar haddii daalku uu yahay mid ka mid ah sababaha ugu muhiimsan ee ciyaartoy badan oo lumiya tartamada. Dhamaadka wareeggaaga NPP-gaaga oo ah cayaariye, waxaad ku adkeyn doontaa dulqaadka aad u baahan tahay si uu kuula socdo inta lagu guda jiro tababarka iyo ciyaaraha.
Daaweynta cudurada kala duwan
Meelaha caafimaadka, Nandrolone Phenylpropionate ayaa loo adeegsaday daaweynta cudurrada daba dheeraatay. Tusaale ahaan, daroogada ayaa caawisay bukaanada qaba HIV / AIDS inay dib u helaan muruqyada luntay. NPP waxay kobcinaysaa kobaca murqaha iyo sidoo kale inay ka caawiso dadka isticmaala si ay u qaataan qiyaasaha qaarkood. Dad badan oo qaba cudurka HIV / AIDS ayaa ka cabanaya miisaan badan, kuwaas oo markaa saameynaya koritaanka muruqa. Nandrolone Phenylpropionate waxay u timaadaa duco badan oo bukaanno badan oo jecel inay culeysyada qaar helaan. Dhanka kale, NPP ayaa ku caawisay daaweynta dhiig-yaraanta illaa iyo markii ay kiciso wax soo saarka unugyada dhiigga cas. Bixinta nafaqooyinka sidoo kale waxay kordhisaa kororka unugyada dhiigga cas ee ku jira jirkaada oo kor u qaadaya unugyada. Nandrolone Phenylpropionate ayaa sidoo kale leh waxyaabo kale oo muhiim ah oo ay ka mid yihiin kiniinada kolajka xitaa markaad qaadato qiyaasta hoose. Intaa waxaa dheer, NPP waxay kor u qaadi kartaa rabitaanka cuntadaada taasoo ka dhigeysa steroid heer sare ah oo loogu talagalay wejiyada qashin-qubka.
Noocyo kala duwan oo loo yaqaan 'steroid steroid' ah oo loo yaqaan 'steroids'
Xaqiiqo ma jiro cayaar ama jir-dhiseyaal waxay jecel yihiin in ay isticmaalaan dariiqooyin kala duwan oo loogu talagalay duufaanta kadibna raadso mid kale si loo yareeyo marxaladda. Taasi waxay noqon kartaa mid qaali ah iyo sidoo kale inay kuu muujiso khataraha caafimaadka ee daran. Si kastaba ha noqotee, Nandrolone Phenylpropionate wuxuu kuu soo bandhigayaa fursad aad ku duujiso oo aad jarjartid dufanka jirka ee aadka u badan markaad ujeedo tahay inaad ku guuleysato murqaha saafiga ah. Inkasta oo NPP ay badanaaba tahay ciriiri caan ah oo caan ah, markaad si sax ah u dillaacday waxay kaa caawin kartaa inaad sameyso qaabka jirka ee aad rabto. Cunista nadiifinta iyo si sax ah u shaqeynta ayaa sidoo kale kaa caawin doonta inaad ku raaxaysato faa'iidada ugu badan Nandrolone Phenylpropionate ugu dambeyntii. Si aad u hesho natiijooyin wanaagsan, la tasho dhakhtarkaaga si uu kaaga caawiyo samaynta qorshaynta NPP ee saxda ah ama wareegga xajmiga.
Dib u eegista Nandrolone Phenylpropionate (NPP)
Hoormoonka Nandrolone wuxuu ka mid yahay sterids-ka ugu qiimaha badan ee laga helo suuqa maanta. Ma xisaabi kartid steroids sare 5 adiga oo aan sheegin Nandrolone Phenylpropionate dib u eegista. Dhibaatada kaliya ayaa ah in NPP aan marnaba la siinin wakhti ku filan oo ay ku iftiimiso, laakiin kuwa ku kalsoon in daroogadu had iyo jeer siiyaan jawaab celin wanaagsan. Dumarka caafimaadka, NPP ayaa muhiim u ah daaweynta cuduro kala duwan sida anemia, waxay ka caawisay dadka qaba HIV / AIDS inay helaan miisaanka lumay iyo sidoo kale kicinta murqaha haray si ay u koraan. Intaa waxaa dheer, kuwa qaba osteoporosis sidoo kale waxay ahaayeen kuwo ka faa'iideystayaal badan oo ka mid ah noocan ah Nandrolone fantastik ah. Marka aad fiirinayso kala duwanaanshaha Nandrolone Phenylpropionate macaamiisha, waxaad ogaan doontaa in dadka intiisa badani ay muujinayaan farxadooda ka dib markii steroid ka caawiyay in ay gaaraan ujeedooyinkooda daaweynta. Dhakhaatiirta caafimaadka ayaa sidoo kale ku daray fekerkooda ku saabsan steroidkani oo ku adkeynaya daroogo awood badan oo ka caawiyay kumanaan bukaan ah.
Dhismaha jirka iyo cayaartoyda, Nandrolone Phenylpropionate ayaa door muhiim ah ka ciyaartay horumarinta waxqabadka guud ee ciyaartoyda iyo sidoo kale iyaga oo awood u siinaya in ay gaaraan himiladooda ama ujeedooyinka goynta. Marka la socdo hab raashin habboon iyo shaqeyn, NPP waxay bixisaa natiijooyin tayo leh oo degdeg ah. Kuwa u raadinaya daroogada si ay uga caawiyaan inay yeeshaan murqaha saafiga ah, waxay kor u qaadaan awoodda jidhka, waxayna sidoo kale awood u siiyaan inay helaan qaabka jirka ee la doonayo markaa dejinta Nandrolone Phenylpropionate waxay noqon doontaa fikrad wanaagsan. Steroid waxaa sidoo kale loo yaqaanaa awoodda ay u leedahay kor u qaadista rabitaanka cuntada iyo in ay awood u yeeshaan isticmaalayaasha inay ku daraan waxoogaa pounds ah. Si kastaba ha noqotee, dadka qaarkiis waxay ka cabanayaan inay dareemaan waxyeelo dhinaca Nandrolone Phenylpropionate ah. Caadi ahaan, nadaamka jirka bani'aadamka wuxuu u dhaqmaa si kala duwan oo ah alaabooyin kala duwan oo dheeraad ah si loo isticmaalo steroids. Cirbadaha mararka qaar waa ay xanuun badan yihiin dad badan, laakiin wax fiican ayaa ah in aad u isticmaali doonto oo kaliya steroid muddo gaaban. Dhakhtarkaagu wuxuu kaa caawin doonaa sidii loo xakameyn lahaa dhibaatooyinka caadiga ah ee caadiga ah. Sidaa darteed, waxad ka walwaleysaa haddii aad daawada si sax ah u qaadato. Waxkasta oo aad ubaahan tahay inaad ka ogaato Anavar (Oxandrolone) jir dhiska
Waxaa intaa sii dheer, qiyaasta loo yaqaan NPP ayaa loo qorsheeyay qaab u saamaxaya inaad ka bogsato cirbadihii hore ka hor intaanad tegin midka xigta. Habka ugu wanaagsan ee lagu ogaan karo tayada Nandrolone Phenylpropionate waa inaad si sax ah u isticmaasho daroogada isla markaana kudheesho dhakhtarkaaga marxalad kasta ama xaddiga qiyaasta. Sidoo kale, hubso in aad ka iibsato steroid ka soo samaysan shirkadda Nandrolone Phenylpropionate. Inta badan dadka isticmaala NPP kuwaas oo ka cabanaya dhibaatooyin daran ayaa ah kuwa ka badan kuwa soo mara ama ay ku fashilmaan inay tagaan baadhitaan caafimaad kahor intaan la isticmaalin steroid.
Nandrolone Phenylpropionate (NPP) ee iibka
Sida horay loo sheegay, way adkaan kartaa in la iibsado Nandrolone Phenylpropionate iyada oo aan lahayn dhakhtar rijeeto ah ee Maraykanka. Si kastaba ha ahaatee, waddamada kale ee daroogada aan xadidneyn, waxaad si sahal ah uga iibsan kartaa Nandrolone Phenylpropionate online ama sheyaalka dhulka hoostiisa. Markii hore, way adagtahay in la helo NPP tan iyo markii ay soo jiidatay walaalkeed weyn Nandrolone decanoate. Waqtigan xaadirka ah, waxaan nahay hogaamiyaha shirkadda Nandrolone Phenylpropionate ee gobolka. Waxaad mar walba ka dhigi kartaa amarkaaga boggayaga internetka wakhti kasta, waxaanan ku siin doonaa badeecada wakhtigeeda. Waxaan had iyo jeer u shaqeynaa si aan u hubino inaad hesho steroids tayada oo ay ku jiraan Nandrolone Phenylpropionate iyo kuwo kale oo badan. Waxaad awoodi kartaa iibso Nandrolone Phenylpropionate in badan ama aad iibsato ku filan wareeggaaga. Xor ayaad u wacan tahay inaad na siiso wicitaan waqti kasta oo aad rabto inaad samayso amar ama markaad wax su'aal ah ka qabtid alaabtayada.
Ha ku kalsoonayn wax soo saaraha Nandrolone Phenylpropionate / iibiyaha aad ka heshay suuqa. Steroidku waa sida daawooyinka kale, waana in aad had iyo jeer taxaddar u yeelatid. Samee cilmi-baarista oo waqti qaado si aad u fahanto sida soo saaraha Nandrolone Phenylpropionate ee aad ku xiran tahay inaad ku kalsoon tahay. Haddii iibiyuhu kuguma dammaanad qaadi karo natiijooyinka tayada alaabtiisa, ka dibna raadso beddelaad. Eeg aragtida macaamiisha kala duwan; waxay kaa caawin doonaan inaad sameysid go'aanka wargelinta. Waxaan aaminsanahay in aad uqalantahey sterids tayo sare leh oo bixin doona natiijooyin tayo leh waqtiga ugu gaaban. Waxaan sidoo kale soo saareynaa iyo siineynaa Nandrolone Phenylpropionate budada dhammaan macaamiisheena. Ka hor intaadan iibsan steroid aanad hubin inaad fahamto sharciyada dalkaaga si aad isaga ilaaliso in lagu ganaaxo ama xabsi lagu galo. Wixii macluumaad dheeraad ah naga soo wac + 86 (1892) 9328602 iyo shaqaalahayaga macaamiisheena caawinta macaamiisheena waxay kaa caawinayaan ama ka jawaabi doonaan dhammaan welwelkaaga.
NPP vs Deca loogu talagalay jirka jirka
Labadan nandrolone steroid labadaba waxay dhammaantood cadeeyeen inay muhiim u yihiin jir-dhisidda si ka badan sidii loo gooyey iyo jaranjarrada labadaba. Marka la eego natiijooyinka, labaduba Nandrolone Phenylpropionate (NPP) iyo Nandrolone decanoate (Deca) Si lamid ah u shaqee isla markaana u keen natiijooyin isku mid ah. Natiijooyinka muuqda ee aad jeceshahay waxaa ka mid ah koritaanka muruqa, kor u qaadista xoogga jirka iyo kicinta wax soo saarka unugyada dhiigga cas. Farqiga weyn ee u dhexeeya labadii qayboodba waa mujurucyada ku xiran mid kasta. Tusaale ahaan, NPP waxay ka kooban tahay aaladda gaaban ee phenylpropionate halka Deca ay ka kooban tahay ester ester dheer. Ku-daridda asaasiyeyaashu waa sababta nafta kala duwan ee firfircoon ee laba-xakamood. Nandrolone Phenylpropionate (NPP) wuxuu leeyahay nus ka mid ah maalmaha 6 halka Nandrolone decanoate (Deca) Nolosha nusku waxay soconeysaa ilaa laba toddobaad. Qiyaasaha steroids ayaa sidoo kale kala duwan tan iyo markii loo qorsheeyay sida ay u kala badh yihiin.
Markaad doorato Nandrolone Phenylpropionate (NPP) (CAS 62-90-8), waa inaad si joogto ah u qaadataa qiyaasta maadama ay leedahay nolol firfircoon oo ku jirta dhiiggaaga. Isticmaalayaasha Dandaaniga (Deca) ee Nandrolone, qiyaasaha la talaalay ayaa la qaadan karaa laba jeer toddobaadkii. Labada istiraatiijiyadoodu waxay samayn karaan qumman wacan iyo jarida jaridda si ay u dedejiso iyo sidoo kale awood kuu siinaysa inaad gaarto natiijada riyooyinka. Marka la eego natiijada dhakhsaha badan, Nandrolone Phenylpropionate waxay u taagan tahay sababtuna waa sababta ay ciyaartoyda badani u doonayaan inay u dulqaataan irbadaha soo noqnoqda. Wareegyada NPP aad ayey u gaaban yihiin, taasoo macnaheedu yahay oo kaliya inaad u adkeyso cirbadaha mudo ah isla markaana aad ku guulaysato riyooyinkaaga. Iyada oo tayo sare leh Nandrolone Phenylpropionate, waxaad xaqiijin kartaa inaad la kulanto natiijooyinka xitaa ka hor inta aanad dhamaystirin wareeggaaga.
Soo koobid, labadaba steroids aad ayay u fiican yihiin markaad si sax ah u isticmaashid. Ka fogow xad-dhaafka oo u hoggaansamaan dhammaan tilmaamaha qiyaasta ee natiijooyinka wanaagsan. Isku kalsoonow habka loo isticmaalo cunto caafimaad iyo habboon. Xasuuso inaad dhakhtarkaaga ka qayb gasho habka oo dhan si aad u noqoto dhinaca badbaadada. Hadda, doorashadu waa adigaa, waxaad tagtaa Nandrolone Phenylpropionate ama Nandrolone decanoate.